ပထမဆုံး မက္ကာဒေးမီးယား စီးပွားဖြစ် သစ်သီးခြံကို ၁၈၈၀ ဆယ်စုနှစ် အစောပိုင်းတွင် နယူးဆောက်သ်ဝေးလ်စ်ပြည်နယ်၊ လစ္စမောမြို့ အရှေ့တောင်ဖက် ၁၂ ကီလိုမီတာ (၇.၅ မိုင်)အကွာ Rous Mill တွင် စတင်စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး M. tetraphylla မျိုးစိတ်များ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းနှင့် ၂၀ ရာစု အစောပိုင်းတို့တွင် ဩစတြေးလျနိုင်ငံရှိ လုပ်ငန်းငယ်များ တိုးတက်မှုများ အပြင် မက္ကာဒေးမီးယားကို ၁၉၂၀ ဆယ်စုနှစ်တွင် ဟာဝိုင်ယီ၌ စီးပွားဖြစ် စိုက်ခင်းများအဖြစ် တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးလာခဲ့ကြသည်။ ၁၈၈၂ ခုနှစ်တွင် ဟာဝိုင်ယီသို့ မက္ကာဒေးမီးယားအစေ့များကို ဝီလျံ ဟားဘတ် ပါဗစ် က စတင် တင်သွင်းခဲ့သည်။ ဟာဝိုင်ယီထွက် မက္ကာဒေးမီးယားသည် နိုင်ငံတကာတွင် လူသိများလာခဲ့သည်။ သို့သော် ပိုလျှံစွာထုတ်လုပ်ရာမှ ဈေးနှုန်းနည်းပါးမှုကြောင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ဟာဝိုင်ယီရှိ မက္ကာဒေးမီးယား ထုတ်လုပ်မှုများ ကျဆင်းခဲ့သည်။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ "A smaller Macadamia fromamore vagile tribe: inference of phylogenetic relationships, divergence times, and diaspore evolution in Macadamia and relatives (tribe Macadamieae; Proteaceae)" (July 2008). American Journal of Botany 95 (7): 843–870. doi:10.3732/ajb.0700006. ISSN 1537-2197. PMID 21632410. Retrieved on4Apr 2013.
↑ Macadamia Power Pty (1982). Macadamia Power inaNutshell. Macadamia Power Pty Limited, 13. ISBN 978-0-9592892-0-6။
↑ Schmitt၊ Robert။ Macadamia Nuts။ Hawaiian Historical Society။ April 7, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ Christine Allen (October 2001). "Treacherous Treats – Macadamia Nuts". Retrieved on January 15, 2014.
Macadamia F.Muell.။ Australian Plant Name Index (APNI), IBIS database။ အပင် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ သုတေသနစင်တာ၊ ဩစတြေးလျ အစိုးရ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မက္ကာဒေးမီးယား&oldid=391701" မှ ရယူရန်
၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၈၊ ၀၅:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၈၊ ၀၅:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။